कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट बेलायतमा एक धनकुटेलीको निधन – Dhankuta News : Daily Online News From Nepal
२०७७, ४ बैशाख बिहीबार २१:३२
धनकुटा चैत्र ४ । बेलायतमा बसोवास गर्दै आएका एक जना धनकुटेलीको नोवेल कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट निधन भएको छ । साविक हात्तिखर्क गाविस हाल छथरजोरपाटी गाउँपालिका वडा नं. १ माक्लुङ निवासी हरिमान गोम्देनको मृत्यू भएको हो ।
केहि दिनदेखि कोरोना भाईरसको संक्रमणले विरामी भएकाले उनको लण्डन वेस्टस्थित हिलिङडन अस्पतालमा उपचार गराईरहेका थिए । उनको उपचारको क्रममा हिजो अर्थात बैशाख ३ गते ८२ वर्षको उमेरमा निधन भएको उनका छिमेकी पूर्वबेलायती सेना विश्वासदिप तिगेलाले जानकारी दिए ।
समाजसेवी स्वर्गिय गोम्देन केहि वर्षदेखि लण्डनको हिलिङडन बरोको ‘वेस्ट ड्रेटन’ भन्ने ठाउँमा श्रीमती, छोरी कला र ज्वाई मणि तामाङसँग बस्दै आएका थिए । उनको स्वास्थ्यमा केहि समस्या आएपछि ५ दिनअघि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएका थिए । उनको स्वास्थ्य परिक्षणको क्रममा उनलाई कोरोना ‘पोजिटिभ’ देखिएको थियो । गत मंगलवारसम्म स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आईरहेको चिकित्सकहरुले बताएका थिए । तर, अचानक बुधवार विहान उनको स्वास्थ्यमा खरावी आएका थिए । यसअघि उनमा अन्य कुनै गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेको थिएन ।
शालिन ब्यक्तित्वका धनि स्व. गोम्देन पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा २०३८ सालमा साविक हात्तिखर्क गाउँ पञ्चायतको उपप्रधानपञ्चसमेत भएका थिए । तर, २०४३ सालमा भएको निर्वाचनमा प्रधानपञ्चमा उम्मेद्वार भएकाउनी, थोरै मतले पराजित भएका थिए ।
यस्तै उनी हात्तिखर्कस्थित साविक भारती निम्न माध्यमिक (हाल माध्यमिक) विद्यालयको पटकपटक संचालक समितिका अध्यक्षसमेत भैसकेका थिए । राजनीतिक रुपमा स्व. गोम्देन राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी निकट थिए । उनी २०४९÷५० मा सो पार्टीका जिल्ला कोषाध्यक्ष भएका थिए ।
बेलयाती सेनामा सेवा गरेका पूर्व गोर्खा सैनिक स्व. गोम्देनको जन्म हात्तिखर्क मै वि.सं. १९९४ सालमा भएको थियो । उनको छोरा हाल अष्ट्रेलियामा छन् ।
बेलायतमा अहिलेसम्म १ दर्जन बढी नेपालीहरुको कोरोना भाईरसकै संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेका छन् । मृत्यू हुनेहरुमा अधिकांश भूतपूर्व गोर्खा सैनिक रहेका छन् ।